ခုတလော အိပ်မပျော်ပြန်ဘူး ။ အိပ်ဆေးတွေလဲ တမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းသောက် ။အရင်က တခြမ်းလောက်သောက်ရင် တုံးကနဲ အိပ်တဲ့ ဆေးက အခုဆို ၂လုံးသောက်တာတောင် သိပ်မဖြုံချင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ ပြန်တွေးဖြစ်တယ် ။ သိလိုက်ပြီ ။ ကော်ဖီလေး တခွက် ၊ ဒီလိုတခွက်ပြီးတခွက် ဆက်တိုက်သောက်ဖြစ်နေတာ ခုတလော ပိုများလာတယ်။တနေ့ ကို မတ်ခွက်ကြီးနဲ့၅ခွက် ၆ခွက် အပျော့လေး။ အရင်က အလွန်ဆုံး ရှိမှ ၂ ခွက်ပေါ့ ။ ကြိုက်လို့ လား ။ ??
အင်း .. အရင်ကတော့ဒီလောက်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်လှဘူး ။ ဒီတခေါက် ခရီးထွက်ပြီး အပြန် နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ ကို ပိုကြိုက်လာသလိုဘဲ ။ အကြောင်းလေးတွေ ရှိတာပေါ့ ။ကော်ဖီကြိုက်သူတယောက်ကို ကြိုက်မိတော့သူကြိုက်တာ ကိုယ်ပိုကြိုက်မိသွားတာ ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ၊ သိပ်မှန်တာပေါ့ ။
ကိုယ့်ရောဂါ ကိုယ်ရှာမိတာလေ ။
အင်း ဟုတ်ပါပြီ ။ အကောင်းနဲ့အဆိုး အမြဲဒွန်တွဲနေတာ ဆိုတော့ဒီဟာလေးမှာလဲ ကောင်းတာလေးတွေရော ဆိုးတာလေးတွေပါ ရှိနေတာ သဘာဝကျပါတယ်။
သူ့အကြောင်း အကောင်းအဆိုး မဝေဖန်ခင် သူ့ ကို ဘယ်အချိန်က ဘယ်လူတွေဘယ်လိုစတွေ့ ပြီး နှစ်သက်လာတာလဲ ဆိုတာ အရင်ပြောပြမယ် .. (သူ့ ကြောင့် အိပ်မရလို့သူ့ အတင်းတုတ်မလို့ ပါ ) ။
သူ့ ကို ၉ ရာစု လောက်မှာ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာ စပြီးသောက်သုံးနေကြပြီး အီဂျစ်နဲ့ ယီမင်နိုင်ငံကို ဒီဓလေ့ရောက်သွားတယ် ။နောက်ပြီး မူဆလင်နိုင်ငံ ကိုရောက်တယ် ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှ ဥရောပနိုင်ငံတွေ ၊ အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းနိုင်ငံ နဲ့အမေရိကတိုက်များသို့ပြန့် နှံ့သွားခဲ့ တယ်။ သူ့ မှာ စိတ် ကြွအောင်လှုံ့ ဆော်ပေးတဲ့ ဓါတ်တမျိုး( အဲဒီအချိန်တုံးကတော့Caffeine ဓါတ်ရယ်လို့အတိအကျ မသိဘူးပေါ့ ) ပါနေတယ်ဆိုတာ အဲဒီကတည်းက လူတွေ သိလာကြလို့ ၁၆ ရာစု အစောပိုင်းမှာ မူဆလင်ဘာသာရေးအရ Haraam ပိတ်ပင်ခဲ့ တယ် ။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ် သိလိုရင် ဒီမှာဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ် ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee#Social_aspects ကို ဝင်ကြည့် ပါလေ။
အဓိကပြောလိုတာက ကော်ဖီနဲ့ ကျန်းမာရေး ဘယ်လို ဆက်စပ်နေလဲ ဆိုတာပါ။
ကော်ဖီ (Roasted Coffee) မှာ ဓါတုဇီဝ ဓါတ်အမျိုးပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ပါဝင်တယ် တဲ့ ။ တဝက်လောက်ဟာ Rodent Carcinogen ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဓါတ်တွေပေါ။့ ဒါပေမဲ့အဓိက ပါဝင်နှုံးများတာ တွေကတော့ Caffeine , Cafestol , Acffenic Acid ဆိုတဲ့ဒီ ၃ မျိုးပါ ။
အဲဒီထဲမှာလဲ Caffeine ကဖင်း ဓါတ်က အဓိကကျတယ် ။ သူ က စိတ်လှုံ့ ဆွပေး တဲ့အကြောင်းရင်းပါ။ သူ့ ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အာရုံကြောတွေကို နှိုးဆော်ပေးတဲ့Cortisone နဲ့Adrenalin ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်း တွေပိုထွက်လာရတယ်
ဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ် မှာ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲခြင်းများစွာ တို့ရှိလာပြီပေါ့ ။ အကောင်း ၊ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာလေ ။
၁။ Alzheimer and Dementia - အဲဒီလို အသက်ကြီးလို့ဦးဏှောက် အာရုံကြော ဆဲလ်များ တဖြေးဖြေးချို့ယွင်းပျက်စီးပြီး မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့ သွားတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေမှုကို နဲပါးစေတယ် ။
၂။သည်းခြေအိတ် မှာကျောက်တည် ခြင်း ကို လျော့နဲစေတယ်
၃။Parkinsonism ခေါ်တဲ့အသက်ကြီးလို့ဦးဏှောက်မှ Dopamine ဓါတ်တမျိုးလျေုာ့နဲလို ခြေတုန် လက်တုန် လမ်းမြန်မြန်လျှောက်မရ တဲ့ ရောဂါမျိုး ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့နဲစေတယ် .။
၄။ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ကို လျော့နဲစေတယ်
၅။ဆီးချို ခြင်းကို လျော့နဲစေတယ် ( ကော်ဖီချိုချိုသောက်သူများအတွက်တော့ အကျုံးမဝင်ပါ)
၆။နှလုံးရောဂါတချို့ ဖြစ်ပေါ်နှုံး ကို လျော့စေတယ် ( ဆိုးကျိုးထဲမှာလဲ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ပါဝင်နေပါတယ်။အယူအဆ ကွဲပြားနေကြဆဲ ပါ )
၇။ဝမ်းပျော့ စေတယ် ၊ ဆီးရွှင်စေတယ်။
၈။ Antioxident အစွမ်းရှိလို့အရွယ်မတိုင်မီ ဆဲလ်များ ပျက်စီးမှုကို လျော့နဲစေတယ်( အသက်ကြီးပေမဲ့အရွယ်တင်လိုသူများ ကော်ဖီ မှန်မှန်သောက်ကြပါ ရန် )
၉။ သွားပိုးစားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတယ် ။
၁၀။ Gout ခေါ်တဲ့uric acid ၊ purine ဓါတ်များခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့အဆစ်ယောင်ရောဂါ ဖြစ်နှုံး နဲစေတယ်။
၁၁။တချို့ အသည်းရောဂါ ( အသည်းခြောက်ရောဂါ) နဲ့ကင်ဆာရောဂါ အချို့ ( ခံတွင်း ၊ အစာပြွန်၊ လည်ချောင်း နဲ့ရင်သား ကင်ဆာ ) ဖြစ်ပွားမှုကို နဲပါးစေတယ်။
၁။ တချို့ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ကို အားပေးတယ်
၂။အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းကို ဒုက္ခပေးတတ်တယ် ။ သူက အစာအိမ်မှာ အချဉ်ဓါတ်ထွက်ပေါ်အောင် အားပေးတာကြောင့် ပါ ။
၃။ စိတ်အာရုံကြောတွေကို နှိုးဆွပေးလို့အိပ်မပျော်ခြင်း ၊ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်းတို့ခံစားရပါတယ်။
၄။သွေးထဲက Cholesterol အဆီဓါတ် ကို များစေတယ် ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တတ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ နဲ့သွေးတိုးမှုကို ဖြစ် စေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်
၅။ကော်ဖီ ကို တနေ့၎ခွက်ထက် ပိုသောက်သူများမှာ လုံး ဝမသောက်သူများနဲ့စာရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ သားလျှောခြင်း ၂ ဆမျှ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာလဲ Osteoporosis ခေါ် အရိုးပွ ရောဂါဖြစ်ဖို့ပိုအခွင့်အလမ်းရှိနေပါတယ်။
၆။အူလမ်းကြောင်းမှ အစာအဟာရ သံဓါတ် စုတ်ယမှု ကိုလျော့နဲစေလို့Iron deficiency Anemia ခေါ် သွေးအားနဲ ရောဂါ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
၇။ကလေးငယ်လေးတွေ ကော်ဖီသောက်တာ များရင် ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားမှုကို နှေုာင့်နှေးစေပါတယ်။
၈။ ပြီးတော့ကော်ဖီကို အလွန်အကျွန် ကြာရှည်စွဲသောက်ရင် သွားမှာ အရောင်စွန်းထင်းစေလို့အလှပျက်စေတယ် ။
Caffeine Intoxication ( အဆိပ်တက်ခြင်း)
လူတယောက်ဟာ တနေ့ ကို ကဖင်းဓါတ် 300 mg ထက်ပိုသောက်ရင် အဆိပ်သင့်တတ်တယ်နော်
အာရုံကြောတွေ အလွန်အမင်းအနှိုးဆော်ခံရလို့စိတ်အကြွလွန် ပြီး ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း။ကြွက်သားများတဆတ်ဆတ်တုန်ခါခြင်း၊မျက်နှာတပြင်လုံးနီရဲ ပူလောင်ခြင်း၊ဆီးအလွန်အကျွံများခြင်း ၊ အစာမကြေခြင်း စသဖြင့် ခံစားရမှာ ဖြစ်တယ် .
ဒီထက်ပို ပြင်းထန်ရင် ကဖင်းဓါတ် 192 mg/Kg ( တကယ်လို့50Kg ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသူတဦးဟာ ကဖင်းဓါတ် 10000 mg လောက်) တကြိမ်ထဲမှာ သောက်မိရင် သေဆုံး နိုင်ပါတယ် ။
ဒီတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အကောင်းအဆိုး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာယူနိုင် ဆင်ခြင်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
လမ်းကြုံလို့ ဆက်ပြောချင်တာကတော့ကော်ဖီအမျိုး အစားများ နဲ့ချစ်စရာအမည်များ ။ ကဖင်းဓါတ်ပါဝင်နှုံးများပါ ။ ဒါမှ တနေ့ သောက်တဲ့ကော်ဖီထဲမှာပါတဲ့ကဖင်းဓါတ် ပမာဏကို ခန့် မှန်းနိုင်မှာပေါ့ ။
Coffee percolator · Espresso (lungo, ristretto) · Espresso machine · Drip brew · French press · Turkish coffee · Instant coffee · Chemex · Moka pot · Aeropress · Presso
Americano/Long black · Café au lait/Café con leche · Caffè corretto/Liqueur coffee · Cafe mocha · Cà phê sữa đá · Cappuccino · Coffee milk · Cortado · Greek frappé coffee · Indian filter coffee · Irish coffee · Latte/Flat white · Macchiato (espresso, latte) · Iced coffee · Frappuccino · Red eye · Affogato
Cappuccino · Coffee milk · Cortado · Greek frappé coffee · Indian filter coffee · Irish coffee · Latte/Flat white · Macchiato (espresso, latte) · Iced coffee · Frappuccino · Red eye · Affogato
အဲဒါတွေအသေးစိတ်သိချင်ရင် click လုပ်ပြီးကြည့် ပေါ့နော်
Caffeine 200 mg စီ ပါဝင် နှုံး ရှိနေကြတဲ့ ကော်ဖီ နဲ့တခြားဖျော်ရည်အမျိုးအစားနဲ့ပမာဏတွေ ကို သိနိုင်အောင် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ၊
=Espresso one shot( 30 cc ) ၃ခွက်
=Regular Starbuck (355cc) ၁ခွက်
=Instant Coffee (355cc) ၂ခွက်
=Decaffinated coffee 12 litre
=Coca-Cola2litre
=Green Tea 2.4 litre
=Black Tea 540 cc
ကော်ဖီကြိုက်သောသူများ တန်ရင်ဆေး ၊လွန်ရင်ဘေးဆိုတာလေး သတိရ ဆင်ခြင်ပြီး အပျင်းပြေ ၊ဒါမှမဟုတ် အပေါင်းအသင်းများနဲ့လောကအရသာ ချို ကောင်းလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ခံစားနိုင်ကြပါစေနော်။
:kiki : at 1/31/2009 11:30:00 AM
တွေ့ ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်မြဲဓမ္မတာ၊
မွေးစမှ လှမ်းခဲ့ကြရ လူ့ ဘဝလမ်းဟာ ၊
ကောက်ကွေ့ လှည့်ပတ်ခြင်းများစွာနဲ့ ၊
နောက်ဆုံးမှာတော့ မရဏပန်းတိုင်သို့ သာ၊
သေချာစွာ အရောက်မြန်းကြရမှာမို့ ။
ဒီသံသရာမှာ အဖန်တရာ အထပ်ထပ်နဲ၊့ 
လောကရဲ့ဝဋ်ဒုက္ခများ အတန်တန် မခံကြရလေအောင်၊
ဘဝကူးကောင်းစေဖို့ မနှောင်းသေးတဲ့ အချိန်ရခိုက်မှာ
လောကုတ္တရာ အလုပ်များကို အားထုတ်ကြပါစို့ လား။။
(တရုပ်နှစ်သစ် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ..သေခြင်းကောင်းသောဘဝ၊ လားရာကောင်းသောဂတိ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိကြ ပါစေ )
:kiki : at 1/26/2009 03:22:00 PM
အချစ်လားဟေ့ ဝင်ခဲ့လေကွာ ၊မင်းအတွက်ငါ့ရင်တံခါးအစဉ်ဖွင့်ထားဆဲပါ ။
လွန်လေပြီးတဲ့ ဟိုးတချိန်ကမင်းလိုဘဲ ငါ့ကိုချစ်တယ်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ သူစိမ်းတယောက်၊
တံခါးတောင်မခေါက်ဘဲ တိုးဝင်ဖူးတယ် ငါ့ရင်ထဲကို။
အသည်းစွဲအောင်ချစ်တယ်ပြောပြီး ငါ့ရဲ့ အသည်းကို ခွဲသွားရက်တယ်။
အသက်ထွက်မတတ် ချစ်တယ်ပြောပြီး ငါ့ရင်ဘတ်ကို ပြတ်လုနီးနီး ဗျောတီးခဲ့ဖူးတယ်။
ဘဝတခုလုံးနဲ့ရင်းတဲ့ ငါ့ချစ်ခြင်းကို ပမာမခန့် နဲ့ပစ္စလက်ခတ် သူဖြတ်ခဲ့တယ် ။
လိုရာဆန္ဒသူပြည့်ဝတော့ နှုတ်မဆက်ဘဲ ရုတ်တရက်ထွက်ခွာပြေးရက်ခဲ့တယ်
အချစ်မိုးခေါင်ရပ်ဝန်းက ကန္တာရလို ငါ့အိမ်လေးကို ပိုခြောက်သွေ့ အောင် အမုန်းမီးတောက်တိုက်ခဲ့ တယ်။
အချစ်ခံရတဲ့ တခဏနဲ့အချစ်လန်ကျန်ခဲ့တဲ့ ငါ့ဘဝ နောက်တဖန်ချစ်ရမှာကို ကြောက်ကန်ကန် ဖြစ် နေခဲ့ ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ လည်း ရက်တွေကြာညောင်းအချိန်ဟောင်းခဲ့ ပြီမို့့ ၊
ခုနေအခါမှာ ဒါတွေဟာ ရယ်စရာ တခုလို့ငါ့အတွေးများ ပြောင်းလဲသွားနိုင် ရပြီပေါ့။
အကြောင်းစစ်ကြည့်တော့ ငါ့ဘဝမှာ နောက်တခါမရှင်သန်နိုင်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့
အချစ်သစ်ပင် ချိနဲ့ နဲ့ ကို စမ်းရေအေးလေးဖြန်းပေးခဲ့တဲ့ မင်းကြောင့်ပေါ့ကွယ်။
ခရီးသွားဟန်လွှဲ ယုယခဲ့ တဲ့ မင်းရယ် ..သေလုဆဲဆဲ ငါ့အချစ်ကို ဖြတ်ခနဲ တဖန်
ကြောင်ခံတွင်းပျက်မဟုတ်တဲ့ ငါ နဲ ၊့ ဇရက်တောင်ပံကျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ မင်း ၊
မျှော် လင့်နေဆဲပါ ချစ်သူရာ ။
အချစ်လားဟေ့ ဝင်ခဲ့ လေကွာ ၊ မင်းအတွက် ငါ့ရင်တံခါး အစဉ်ဖွင့်ထားဆဲပါ။
:kiki : at 1/21/2009 02:07:00 PM
မင်းကို တခါသတိရတိုင်း ကောင်းကင်ပြင်ကကြယ်တစ်စင်းကြွေရစတမ်းဆိုရင်၊
စင်္ကြာဝဠာတခွင်မှာ ကြယ်စင်ကင်းတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်တခုဖြစ်ရော့မယ် ။
မင်းကို တခါသတိရတိုင်း သမုဒ္ဒရာပြင်က ရေတစက်ခမ်းခြောက်ရစတမ်းဆိုရင်၊
အပြောကျယ်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ဟာ ကန္တာရဆင်ဆင်ဖြစ်ရော့မယ် ။
မင်းကို တခါသတိရတိုင်း ငါ့မျက်ရည်တစက်ကြွေသက်ရစတမ်းဆိုရင်၊
ငါ့ပါးပြင် နှစ်ဖက်လုံးဟာ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့ စမ်းရေယဉ်နဲ့ မြစ်ငယ်တစင်းဖြစ်ရော့မယ် ။
မင်းကို တခါသတိရတိုင်း မိုးသက်မုန်တိုင်းတချက်ကျရစတမ်းဆိုရင်၊
လောကကြီးတခုလုံးမှာ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး ၊တိုင်ဖွန်း၊ဟာရီကိန်း တဂျိမ်းဂျိမ်းနဲ့ 
အဆက်မပြတ် မွှေတိုက်နေလို့လူတွေငါ့ကို ရိုက်ရော့မယ် ။
ဒီတော့ .. ဒီတော့ ... လွမ်းလဲ မလွမ်းရဲပါဘူး ၊
လွမ်းစိတ်ကိုဖြေ ၊ ချစ်စိတ်ဝေရင်း၊
တမ်းတခြင်း နေ့ ရက်တွေ မရှိအောင် ၊ ငါ ...ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေပါ့မယ် ။
(လွမ်းလွန်လွန်းလို့ရေးဖြစ်သွားတယ် .. ပိုတယ်ထင်လည်း ထင်ကြပါ )
:kiki : at 1/17/2009 11:22:00 AM
သူမသိအောင် ထိရှ ခံစား သို့ ပေငြားလည်း ၊
သူ့ အား ပြုံးရယ် စေချင်သူ ။
မိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်ရှုပ်လို့ 
သူ့ အားပျော်ပါး စေချင်သူ။
ဘဝရှေ့ ရေး အားမာန်မွေးလို့ 
ဟိုးအဝေးမှာ ပျော်ရာမနေ အခက်ပွေလည်း
တွေးကာပူပင် သူ့ ရုပ်သွင်ကို
ကြည်လင် ဝင်းပ စေလိုသူ ။
(အဝေးမှ လွမ်းနေရတဲ့ ကိုယ့်ဘဝ ကို မင်းတယောက် ကြားသိနိုင်ပါစေ )
:kiki : at 1/16/2009 11:39:00 AM
ထောင်ချောက်မှာမိ ဆူးကြိုးတွေငြိ တတိတိရစ်ပါတ် တင်းကြပ်နေတဲ့ လည်ပင်းဆီ
ရုန်းလေရစ်လေ ၊ရုန်းလေ အစ်လေ ဒီလိုအချိန် ၊ ငြိမ်နေတာက ပိုကောင်းမယ်။
တခါတလေ ညှပ်နေတာက ခြေထောက်တင်ပါ၊
ရုန်းလေ နာလေဖြစ်နေပေမဲ့ ၊ ဇွတ်အတင်းရုန်းလို့ခြေကလေးတဖက်သာဆုံးရှုံး ၊
အသက်ရှင် လွတ်မြောက်သွားတဲ့ ကြွက်ငယ်လေးလည်း တွေ့ ဘူးတယ်။
ငြိမ်သက် ရုန်းထွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ဆိုတာ အခြေအနေအရပါဘဲ
ဒို့ ဘဝလဲ ဒီလိုဘဲမို့ရုန်းထွက်ပြီး အသက်ဆက်ရမယ်ဆို
မဆိုစလောက် ဆုံးရှုံးမှုလေးကို ၊ စတေးဖို့ဝန်မလေးပါဘူး ။
( ဧသက်၏ အခြေအနေအရ ကဗျာမှ အကြောင်းအရာတခုကိုမှီငြမ်းပါသည် )
:kiki : at 1/14/2009 08:07:00 PM
၅။ မိမိဝင်ငွေနှင့် လောက်ငှအောင် သုံးစွဲပါ။
ှ၆။ မိမိ၏ဘယ်လုပ်ငန်းတွင်မဆို ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါစေ။
၁၅။ သူတစ်ပါးအား ပြောဆိုရန်ရှိလျှင် ထိုသူ့မျက်နှာကို ကြည့် ၍ ပြောပါ။
၂၃။ သင့်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်မှလွဲ ၍ သင့်အကျင့်စာရိတ္တကို ထိခိုက်စေမည့်အကြောင်းမရှိနိင်။
၂၅။ အလုပ်နှင့်ဘယ်အခါမှ ကင်းကွာမှုမဖြစ်စေပဲ လက်များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပါ။
၃၀။ကိုယ့်အကျိုး သူ့အကျိုး မျှမျှတတဆောင်ရွက်ငြားက မိတ်ကောင်းသဟာပေါကြွယ်ဝ ၏။
ကဲ....အဆွေတို့ရေ အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များ သင့်မှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါသလား မရှိသေးပါက သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါလျှင် ကျင့်သုံးသင့်သည်ဟုထင်ပါသည်။
ကိုယ်တိုင်ရေးသည်မဟုတ်ပါ ။ သူငယ်ချင်းတယောက်မှပေးပို့ လာသော မေးလ် ကို အများသိနိုင်စေရန် တဆင့် ကူးယူဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အောင်မြင်ကြပါစေ။
:kiki : at 1/12/2009 08:37:00 PM
ကြားဘူးတဲ့ အကြောင်းလေးကို ဖေါက်သည်ချချင်လို့ ပါ ။ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီမှ ရတဲ့တရုတ်ဘာသာ မေးလ် တစောင်ကို သိသလောက် ဘာသာပြန် ဖြည့် စွက်ရေးထားတာပါ ။
တနေ့ မှာ ဒီမြို့ ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စာကြည့် တိုက်ကြီးတခု ဟာ နေရာသစ်ရွှေ့ ပြောင်း ဖို့ ကြုံတွေ့ နေ ပါတယ် ။ သူ့ လက်ရှိ နေရာအဆောက်အဦ ဟာ ဟောင်းနွမ်းပြီး အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အတွက် နေရာသစ်ကို မပြောင်းလို့မရတဲ့ အခြေအနေပေါ့ ။ မိုးရာသီလဲ ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အမြန်ဆုံး ပြောင်းရွှေ့ ဖို့လိုအပ်နေတယ် ။ဒါပေမဲ့စာကြည့် တိုက်ရဲ့ဘတ်ဂျက် အသုံးငွေဟာ သိပ်များများစားစား မရှိပါဘူး ။ ဒီတော့စာကြည့် တိုက် တာဝန်ခံ ခမြာခေါင်းခဲနေရတယ် ။ စာအုပ်တွေ များပြားလွန်းလှတဲ့ အတွက် ပြောင်းရွှေ့ ခ စရိတ်စကတွေ ကို တွက်ကြည့် လိုက်တော့ဒေါ်လာ ၃သိန်းလောက် ခန့် မှန်းခြေ ကုန်မယ်ပေါ့ လေ။ ဒါပေမဲ့သူ့ စာကြည့် တိုက်မှာ အသုံးစရိတ်ငွေက ဒီလောက်မရှိဘူး ။
ဒီတော့ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေ ဆီမှ အကြံဥာဏ်တောင်းတယ်ပေါ့။ အတော်လေးကြာတဲ့ အထိ ကျေနပ်လောက်စရာ အကြံ မပေးနိုင် ကြ လို့တာဝန်ခံလဲ လက်မှိုင်ချနေတယ် .. နောက်အချိန် ကုန်ခါနီးမှာ မှ လူသစ် တဦးဖြစ်တဲ့့ဝန်ထမ်းပေါက်စလေးက ထပြီးပြောတယ် ။ သူ အကြံတခု ရတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ တာဝန်ခံကြီးက မယုံ တဝက်နဲ့..ဘာအကြံများလဲ ကွ လို့တာဝန်အရ မေးရတာပေါ့။ စရိတ်ဒီလောက်များများမကုန်စေရပါဘူး ငွေ ၁သိန်းခွဲ လောက်ဘဲ ကုန်မှာပါ ..ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကို အကြံဥာဏ်ပူဇော်ခ ပေးမှ ပြောမယ် လို့ဝန်ထမ်းပေါက်စ က ပြန်ဖြေတယ်။
ဒီတော့ စိတ်ညစ်နေတဲ့တာဝန်ခံ ကလဲ ၊ မင်းပြောသလို လုပ်လို့တကယ် အဆင်ပြေရင် တော့ ပေးရမှာပေါ့တဲ့ ။ ဒါနဲ့၂ဦးသဘောတူ စာချုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းပေါက်စ ရဲ့အကြံအတိုင်းလုပ်ဖြစ်ကြတယ် ။ တကယ်တန်းပြောင်းရွှေ့ ကြတော့စရိတ် ဟာ ၁ သိန်း သာ ကုန်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့စာချုပ် အတိုင်း ဒီ ဝန်ထမ်းကို ၅သောင်းပေးလိုက်တယ်လေ ။ ရှဉ့် လဲလျှောက်သာ ပျားလဲ စွဲသာ ပေါ့ ။
အင်း .. ဒီဝန်ထမ်းပေါက်စလေးရဲ့ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်တဲ့အကြံလေးကို မိတ်ဆွေတို့သိကြပါရဲ့ လား။။
အဟဲ .. မသိရင် ရှေ့ ဆက်ဖတ် ကြည့် ရန် ....
အစည်းအဝေးပြီးလို့နောက်တနေ့ မှာ အဲဒီ စာကြည့် တိုက်အရှေ့မှာရော ၊ သတင်းစာ မှာရော ကြေငြာ စာ ထွက်လာပါတယ် ။ ယနေ့ မှစပြီး ၃ရက်အတွင်း ဤစာကြည့် တိုက်မှ စာအုပ်များအား မည်သူ့ ကို မဆို အခမဲ့၁၀ ရက် ဌားပေးမည် ။ ရက်စေ့ ပြီးပါက အောက်ပါ လိပ်စာသစ် အတိုင်း စာအုပ်များကို မပျက်မကွက်ပြန်လည် ပေးပို့ရမည် ။
အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါဘဲ ။
ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့်စရိတ် သိပ်မကုန်ဘဲ စာကြည့် တိုက်ကိုအောင်မြင်စွာ နဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့ နိုင်သလဲ ဆို တာ မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ကြမှာပေါ့ နော်။
လူငယ်ပေမဲ့အကြံမငယ်သူတွေ ။ အတွေ့ အကြုံ နုပေမဲ့အကြံကောင်းထွက်တတ်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်တိုင်းလဲ စောက်ရူးမဟုတ်သေးပါဘူးနော် .. အဟက်ဟက်....
:kiki : at 1/06/2009 11:10:00 PM
အေးချမ်းလှပပြီး ကျန်းမာ လန်းဖြာ ဝမ်းသာစရာနေ့ ရက်များစွာကို ချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့အတူ ချောမောစွာ ဖြတ်သန်းလို့လိုတာမှန်သမျှ ပြည့် ဝ ရပါစေ .....
:kiki : at 1/06/2009 06:46:00 PM
ရသမျှနဲ့မရောင့်ရဲနိုင်တော့စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်ရပြီ။
ကိုယ်ချစ်သလို သူမှမချစ်တော့လူဖြစ်ကျိုးမနပ်ဘူးလို့ထင်ရပြီ။
ခိုင်းသမျှလုပ်ပေး ပြောသမျှခေါင်းငြိမ့် ၊
မင်းအရိပ်နောက် ထပ်ချပ်မခွာလိုက်မိပြန်တော့ ၊
ကိုယ်ရည် စွမ်းစ မရှိသူတဲ့လေ။
မချစ်တတ်သူနဲ့အချစ်ငတ်သူတို့ 
ဘာလို့ များဆုံတွေ့ ဖို့ ရာ ဖြစ်လာရတာလဲလေ။
အချစ်ဆိုတာ မရှိမကောင်း ၊ ရှိမကောင်းမို့ 
ဘဝဆက်တိုင်း မချစ်တတ်သူသာ ဖြစ်ရပါလို၏ ။
:kiki : at 1/05/2009 03:45:00 PM
တနေ့မှာ ရထားအတူစီးသွားကြတဲ့ ခရီးသည် ၄ယောက် ၊ ယိုးဒယားနိုင်ငံသားတယောက်ရယ်၊ကိုးရီးယားနိုင်ငံသားတယောက်ရယ်၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား ပရော်ဖက်ဆာတယောက်ရယ်၊ထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ရယ် အလ္လာပ သလ္လာပ စကားလက်ဆုံကျလာကြတယ်။ လမ်းတဝက်ရောက်တော့ ကိုယိုးဒယားက သူ့ မှာပါလာတဲ့ မွှေးကြိုင်နေတဲ့ အမွှာကြီးကြီး ဒူးရင်းသီး တွေထုတ်ပြီး တခြားလူတွေကို ဧည့်ခံပါတယ် ။သူကိုယ်တိုင်လဲ အားရပါးရစားပေါ့။ဒီလိုနဲ့ အားလုံးစားလို့ ဝသွားကြတော့ ကျန်နေသေးတဲ့ ဒူးရင်းသီးအမွှာကြီးတွေကို ရထားပြူတင်းပေါက်မှ လွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ် ။ဒါကိုတွေ့ တော့ အင်မတန်စီစစ်တတ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ပရော်ဖက်ဆာက မေးတယ် - ဟာ ..ခင်ဗျားဒူးရင်းသီးတွေက အကောင်းကြီးတွေရှိသေးတာ ဘာဖြစ်လို့ ပစ်လိုက်ရတာလဲ ၊ပေါ့ ။
ဒီတော့ ကိုယိုးဒယားကပြန်ဖြေတာ ..ဒါမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ပေါမှပေါ ၊စားလို့ မကုန်နိုင်ဘူး ၊ဒါကြောင့်ပိုနေတာတွေလွှင့်ပစ်တာပေ့ါ တဲ့ လေ၊
နောက်တနာရီလောက်ကြာတော့ ခရီးပန်းစပြုလာတဲ့သူတို့ ကို ကိုရီးယားခရီးသည်က သူ့ နိုင်ငံထွက် ဂျင်ဆင်းဆေးမြစ်တွေ ထုတ်ပြီး `ဧည့်ခံပါတယ်။ဂျင်ဆင်းဆေးမြစ်တွေနဲ့အားဖြည့်လို့ အပြီး ကျန်နေသေးတဲ့ ဟာတွေကို ဒီကိုရီးယားကြီးကလည်း ရထားပြူတင်းပေါက်ကနေ လွှင့်ပစ်လိုက်ပြန်တယ် ။ဒီတော့ နှမြောတတ်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာကြီးလဲ မေးပြန်ရော ။ ကိုရီးယားကြီးကလဲ ပြောပြန်ရော ။ဒီဂျင်ဆင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အလျှံပယ်ရှိနေတယ်တဲ့ ။ပြန်မသယ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ ။
ဒီလိုပြောသံကြားတော့ထိုင်ဝမ်ပရော်ဖက်ဆာကြီးလဲ ထိုင်နေရာက ငေါက်ကနဲထပြီး သူ့ အနားမှာရှိနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကို ဆွဲမ ပြီး ရထားပြူတင်းပေါက်ကနေ ပစ်ချလိုက်ပါတော့တယ် ။။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲကွယ် ။။
ဒီင်္က တရုတ် သူငယ်ချင်းမလေး ပို့ လာတဲ့ဟာသ e-mail လေးကို နားလည်သလို ဘာသာပြန် ပေးလိုက်တာပါ ။ ဒီ ဟာသလေးဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားမိတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲလေး ဖြည့် စွက်ရေးလို တာ ကတော့ ၊
အကယ်၍သာ ဒီရထားပေါ်မှ ဗမာခရီးသည်တယောက်သာပါလာခဲ့ ရင်တော့ ဗမာ ဂျိုကုပ်မှုး ကြီး ၊ဂျိုကုပ်မှုးလေးတွေ တယောက်ပြီးတယောက်များ ရထားပြူတင်းပေါက်မှ တန်းစီပြီး အပစ်ချခံနေရမလား လို့ လေ ။အဟဲ ဟဲ စိတ်ကူး.ယဉ်ကြည့် ရုံ လေးပါ ။ ၆၅ နှစ် နဲ့ တွေ့ ရင်တော့ တွက်ခြေမကိုက်ဘူးနော် ...တော်ပြီ ဆက်မတွေးတော့ပါဘူး ဆက်တွေး ဆက်ရေးနေရင် အနှစ် ၁၃၀ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ ...
ဒီနေရာတင် ပုံပြင်လေး တခန်းရပ်ပါပြီ ။။။။
:kiki : at 1/04/2009 02:49:00 PM
ခွင့်ရက်ရှည်ယူပြီးဒီနေ့ မှအလုပ်ပြန်စဝင်တော့ အလုပ်ပျင်းရောဂါနဲ့မနက်ပိုင်းမှာယောင်ချာချာဖြစ်နေတယ် ။အေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်ထင်ထားတာ အရေးပေါ်လူနာရောက်လာမှဘဲယောင်ခြောက်ဆယ်ဇာတ်လမ်းပြတ်တော့တယ် ။
လူနာက အသက် ၇၀ကျော် အဖွားကြီးတယောက်ပါ ။ ပိန်ပိန်ပါးပါး ၊နေ့ လည်စာ စားရင်းနဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာ ရုတ်တရက်အသက်ရှုကြပ်ပြီး တကိုယ်လုံးပြာနှမ်းတက်သွားလို့သူ့ မိသားစုက ဆေးရုံကိုခေါ်လာတာပေါ့ ။
ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း လူနာရဲ့ ဆေးရာဇဝင်အတိုချုပ် ကမန်းကတန်းမေး ။လူနာ စမ်းသပ် ၊နှလုံးကြောင့်ဖြစ်ဖို့ များတာကြောင့် ECGဆွဲဖို့ လုပ် ။drip တလုံးအမြန်ချိတ်ပေါ့ ။ ထမင်းစားနေတုံး ရုတ်တရက် ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရတာ ၊ နှလုံးကြောင့် မဟုတ်ရင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့ တာ ဖြစ်နှိင်လို့ဒီနေ့လည် ဘာဟင်းစားလဲ မေးကြည့် ရတယ် ။ဒီတော့ မှ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိရတော့တယ်လေ။
စားတာက ငဖယ်ဆုပ်လို အသားလုံးပါတဲ့ဟင်းချို တဲ့။ဒါကြောင့် ကမန်းကတမ်းဘဲ ဘေးကလူကို ဖယ်ခိုင်းပြီး လက်သီးဆုတ်၂ဖက်နဲ့လူနာအဖွားကြီးရဲ့ရင်ညွန့် နဲ့ အစာအိမ်အပေါ်နားကို ရှိသမျှအားဖြစ်ညှစ်ပြီး ဖိတွန်းရတယ် ၊ ၁ခါ ၊၂ခါ မရတာနဲ့၃ကြိမ်မြောက်မှာ ကိုယ့် တကိုယ်လုံး ရှိတဲ့weight နဲ့ဖိပြီးတွန်းထုတ်တော့ မှ ၊ ထွက်လာပါတယ် ၊ ကိုယ်တော်ချောက ။ ငယ်ငယ်တုံးက ဆော့ဖူးတဲ့ ကြွေဂေါ်လီလုံးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့အသားတုံး မာမာအလုံးတလုံးလေ ။ ဒီတော့ မှ အဖွားကြီးလဲ ချောင်းဆိုးသံလေး ပေးပြီး အသက်ပြန်စရှုပါတော့ တယ် ။( တော်ပါသေးရဲ့ငဖယ်လုံးရယ် ၊ နင်သာ စောစောပြန်ထွက်မလာရင် ငါဘဲအသက်ထွက်ရပါတော့ မယ်) ။
ဒါကြောင့်လူတိုင်းကို ဒီလို Choking ဖြစ်လာရင် လိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်ပြုစုနည်းလေး သိထားသင့် တယ် ထင်လို့ဒီစာလေးရေးဖြစ်တာပါ။
Heimlich Maneuver လို့ ခေါ်တဲ့နည်းလမ်းလေး တခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ထိုလူ ရဲ့အသက်ရှု လမ်းကြောင်းမှာ အရာဝတ္ထု တခုခု(ဥပမာ -မာသော ၊အတုံးကြီးသော စားစရာ ၊ Loosen Denture ၊ ချောင်နေသောသွားအတု ၊စသဖြင့်) အမှန်တကယ် ပိတ်ဆို့ နေမှု ရှိ ၊မရှိ အရင် စမ်းစစ်ပါ ။ထိုလူနာအား တိုက်ရိုက်မေးကြည့် ပါ ။ သူ စကားပြောနိုင် ၊ ခြေဟန်လက်ဟန်ပြနိုင် တယ်ဆိုရင်ပေါ့့။သေချာရင်တော့ဒီလို စ လုပ်ပါ။
၁ ။လူနာက မတ်တတ်အနေအထားဆိုရင် အလွယ်ဆုံးပါ ။ပြုစုမဲ့လူက အနောက်ဖက်မှာရပ်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းလူနာအား ခါးမှပွေ့ ပါ ။မိမိရဲ့ လက်၂ဖက်ကိုယှက်၍ လက်သီးဆုပ်ပုံသဏ္ဍာန်လုပ်ပြီး လူနာရဲ့ ရင်ညွန့် ရိုးအောက် ၊ အစာအိမ်အပေါ်ဖက်နားမှာ လက်သီးဆုပ်ဖြင့်အား အရှိန်နဲ့အနောက်ဖက်အပေါ်ဖက်သို့ မြန်မြန်ဆွဲတင်ပေးပါ။
တကြိမ်နဲ့ မရရင် ၂ကြိမ် ၊၃ကြိမ် ဆက်တိုက် လုပ်ပါ။ အထဲမှာ ပိတ် ခံ နေတဲ့အရာဝတ္ထု မထွက်မချင်းပေ့ါ။
လူနာဟာကလေးအရွယ် ခပ်ငယ်ငယ်( အခုခေတ်မှာ Jelly အတုံးတွေ စားရင်း အဆင်မသင့်လေပြွန်ထဲ လျှော ဝင်ပြီး ပိတ်ဆို့ တတ်တယ်လေ) ဆိုရင်တော့ ဒီလို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်အား လက်တဖက်ဖြင့် ရင်ခေါင်းအောက်မှ ပွေ့ ချီပြီး ၊အခြားလက်တဖက်ဖြင့် ကျောမှ ဆတ်ကနဲ ရိုက်ချပါ ။ အထဲမှာခံနေတဲ့အရာဝတ္ထုထွက်လာတဲ့ အထိပေ့ါ ၊ ကလေးရဲ့ အရိုးလေးတွေဟာ နုနယ်လို့ရိုက်တဲ့အားအရှိန်ကို သတိထားဖို့ လိုပါတယ် ။
တကယ်လို့ လူနာဟာ မတ်တပ်ရပ် အနေအထားမျိုး မဟုတ်ရင် သို့ မဟုတ် အသက်မရှု၊ နှလုံးမခုန်တော့ ရင် ၊ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံစံတွေအတိုင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်
လူနာရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ပိတ်ဆို့ နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကို အရင်ဖယ်ထုတ်ပါ ။လူနာကို အောက်ခံ မာသောကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဖြေးညှင်းစွာနေရာချပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်း၊ အသက်ရှုခြင်း ၊သွေးလှည့်ပတ်ခြင်းABCs ( Airway , Breathing , Circulation )check လုပ်ပါ။
အကယ်၍ လူနာမှာ အသက်မှန်အောင် မရှုလျှင် ထိုသူရဲ့နှာခေါင်းကို မိမိလက်တဖက်ဖြင့်ပိတ်၍အခြားလက်တဖက်ဖြင့် လူနာ၏မေးရိုးအားအပေါ်သို့ ဆွဲပင့်ပြီး ပါးစပ်ခြင်းတေ့၍မိမိရဲ့ လေကိုမှုတ်သွင်းပေးပါ ။( မှတ်ချက် ...ဤ နည်းမှာ ၊ မိန်းမပျိုလှလှလေးများအား ပူရိဿယောကျာင်္းများ အပြုစုလိုဆုံးနည်းလမ်းတခု Mouth to Mouth Respiration ဖြစ်ပါသည် )
ထို့ နောက် လူနာရဲ့ အသက်ရှုမှု ။နှလုံး ခုန်မှု ကို စစ်ဆေးပြီး CPR စလုပ်ပါ .
ဒီတချိန်ထဲမှာဘဲ EMS (EmergencyMedicalService )ကို အကြောင်းကြားထားပြီး ထိုအဖွဲ့ ရောက်မလာမီ အချိန်လေးအတွင်းမှာ မိမိသိထားတဲ့ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းနဲ့ 
တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အသက်တချောင်းကို ကယ်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဦးဏှောက်ဟာ အောက်စီဂျင်လို့ ခေါ်တဲ့လေသန့် ပြတ်လပ်တာ အချိန် ၈ မိနစ်ကျော်သွားရင် လူမသေသေးပေမဲ့ ဦးဏှောက်သေတတ်လို့ ပါဘဲ။ Brain Death ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
အခွင့် ကြုံရင် လုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးတခု လူတိုင်း ပြု နိုင်ကြပါစေ
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်တမျိုးပါ ။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ။
:kiki : at 1/03/2009 09:07:00 AM
မဝင်ရ တဲ့တားမြစ်နယ်မြေ ၊
အပြင်လူ မဝင်ရ ၊ အတွင်းလူတော့အလျဉ်းသင့် သလို ချွင်းချက်ကလေးတော့ရှိမှာပါ ။
မခူးရ တဲ့တားမြစ်မှု ဟာ ၊
အပင်မှာ အမြင်တင့်စွာ လန်းဆန်းလှပ ပန်းဘဝလေးများကို
ကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်မှာပါ ။
မစားရ တဲ့တားမြစ်ချက်ဟာ ၊
မတည့် တာ စားလို့ခါးသက်စွာ ခံစားရမဲ့ရောဂါဘယ များအား
တားဆီးပေးဖို့ဖြစ်တာပါ ။
မသောက်ရ လို့တားမြစ်ထားတာ ၊
မူးရင်မမောင်း ၊ မောင်းရင် မမူးလို့ယာဉ်တိုက်မှု မတိုးရလေအောင်
အန္တရာယ် အသွယ်သွယ် မှ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့သိကြမှာပါ ။
မကြည့် ရ လို့တားမြစ်ထားတာ ၊
ဦးဏှောက်နုနယ် ကလေးအရွယ် လေးများ ၊ အတုခိုး မမှားကြရအောင်
ဟိုကား ဒီကား ဆင်ဆာများနဲ့ အသက်ရွယ် အလိုက် ရွေးချယ်ပါ ။
မချစ်ရ လို့တားမြစ်တာတော့၊ ငါ မင်းကို နားမလည်ပါ ၊
လူတကာကို သူက တော့ချစ်နိုင်ပြီး
ငါ့ အချစ်ကိုမှ သီးသန့်တားမြစ်လေတာ လား ။
ဆူးကြားက ဒီ ပန်းတပွင့် ကိုမှ ၊
ထူးထူးခြားခြားလိုချင်မိတာမို့၊
မင်းတယောက်ရဲ့ တဖက်သတ် ချမှတ်မှုကို ၊
ငါ မနာခံချင်ပါဘူးနော် ဇွတ်ချစ်မှာဘဲ ။
:kiki : at 1/02/2009 04:28:00 PM
မမြင်ရတဲ့၊မထင်ရတဲ့နှောင်ကြိုးလေးတွေ တမျှင်ချင်း ၊ တကြိုးချင်း တဖြေးဖြေးရစ်ပတ်ခဲ့ တာကြာလာတော့လဲ ခိုင်မြဲလွန်းလို့ ဒီသံယောဇဉ်မျိုး ဖြတ်ရခက်ခဲ့ ပြီလေ ၊
အစမှာ မတွေ့ ခဲ့ ရရင် အကောင်းသား ။တွေ့ ပြီးတော့လဲ မချစ်မိခဲ့ ရင် အကောင်းသား
အကြောင်းတရားတွေ များစွာ ကြားထဲက ဘာလို့မင်းနဲ့မှ ချစ်တတ်ခဲ့ မိတာလဲ လေ ။
မမြင်ရတဲ့ မင်းအရိပ်များစွာ ကို စိုးထိတ်စွာနဲ့စောင့်စားနေမိတတ်ပြီ ၊
မကြားရတဲ့ မင်းအသံလေးကို ရူးသွပ်စွာနဲ့ ကြားယောင်နေမိတတ်ပြီ ၊
လူမသိ သူလဲမသိ ၊ကိုယ်တိုင်တောင်ရေရာအောင်မသိလိုက်တဲ့ ဒီနှောင်ကြိုးလေးတမျှင်
တနွယ်ငင် တစင်လုံးတော့ မပါစေချင်ဘူး
ဆွေးမနေချင်လို့ဝေးရာမှာ နေတော့မယ်လို့ စိတ်ဘ၀င်ကိုကြိတ်တင်းကာထားပေမဲ့။
မပြတ်နိုင်တဲ့ ဒီနှောင်ကြိုးငယ် မို့ ၊ရူးမိုက်မိတာ အခါခါရှိခဲ့ပြီ
နောင်သံသရာအဆက်ဆက်လဲ မင်းအတွက်ဆို ကိုယ့်အသက်ပါပေးဆက်ရဲပါတယ်
ရူးမိုက်ရမဲ့ အရွယ်တွေကျော်လွန်ခဲ့ ပေမဲ့ဆူးခိုက်စွာနဲ့မင်းကိုချစ်နေ ဆဲ ဆိုတာ မင်းသိလှည့်အုံး။
:kiki : at 1/01/2009 05:00:00 AM